Zotra Ivato sy Ambohitrimanjaka: naneho ny kilema sy ny gaboraraky ny taxi-be ny mpanjifa | NewsMada
Zotra Ivato sy Ambohitrimanjaka: naneho ny kilema sy ny gaboraraky ny taxi-be ny mpanjifa
Ny asabotsy teo, samy nanao hetsika hanoherana ny tsy rariny ataon’ireo mpitatitra ny mponina eny Ivato sy eny Ambohitrimanjaka. Ho an’ny eny Ivato, vitsivitsy ireo nanohina ny antso. Tsy araka ny fitabataban’ny olona mpandeha taxi-be ny fahatongavana naneho hevitra sy firaisankina.
Anisan’ny fitakian’ny mpandeha ny hanitsiana ny saran-dalana ho an’ny tapa-dalana, tsy maintsy 500 Ar ny aloan’ny mpandeha, na akaiky aza ny toerana aleha toy ny miala eo Ivato mankeo Talatamaty. Tokony hotazomina ny 300 Ar ho marimaritra iraisana, raha ny hevitry ny mpandeha hatrany.
Mbola betsaka ireo mpihodina an-dalana fa tsy mandeha manatitra ny olona any amin’ny farany any Vassacos raha miala avy any Ivato. Ny sasany koa, hatreo Talatamaty ihany amin’ny hariva fa tsy tonga any amin’ny Horizon Ivato.
Namaky bantsilana ny tsy fanajan’ny taxi-be ny mpandeha ihany koa ireo mpandeha vitsy naneho hevitra teny Ivato afakomaly.
Ny teny Ambohitrimanjaka, anisan’ny fitarainan’ny olona ny tsy fisian’ny taxi-be rehefa manomboka hariva ny andro. Midangana ny saran-dalana kanefa tsy mahafapo ny tolotra.